ကျော်ထက်ဝင်း နည်းပညာ တက္ကသိုလ် ဘားအံ နှင့် ဇွဲကပင်မြေ Technological University Hpa-an: ချစ်စနိုးဦး မင်းသမီး Chit Snow Oo Attress model Myanmar
ချစ်စနိုးဦး မင်းသမီး Chit Snow Oo Attress model Myanmar
She is Myanmar sexy, pretty and popular actress, film star, Chit Snow Oo. She is pretty, cute and actress Myanmar new faced actress. She is getting one place in Myanmar film and entertainment industry.
Myanmar pretty film star, Hot Myanmar celebrity, Myanmar sexy actress, Myanmar famous actress, Myanmar beautiful girl, Hot Myanmar fashion girl photos, pictures, Asian cute girl.
သူလေးကတော့ ရုပ်ရှင် သရုပ်ဆောင်သစ်ကလေး ချစ်စနိုးဦး ပါ။ သူက ချစ်ဖို့ကောင်းပြီး စွဲဆောင်မှု ရှိတဲ့ မြန်မာမင်းသမီး တစ်ယောက်ပါ။
ရေးသားသူပြုစုသူ ကျော်ထက်ဝင်း နည်းပညာတက္ကသိုလ်-ဘားအံမြေ အချိန် 3:59 AM